काठमाडौं। कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनमा जाने निर्णय गर्दा संविधानको धारा उल्लेख गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था नभएको बताएका छन्। ‘मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनमा जाँदा त्यसको निर्णय गर्दा धारा खुलाएर गर्नुपर्छ भन्ने कुन संविधान, कुन कानूनमा छ,’ उनले भने, ‘त्यति त सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्न जानेले थाहा पाउनुपर्छ नि।’
उनले संसद विघटनको निर्णय गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आवश्यक नपर्ने पनि उल्लेख गरे। तर, सरकारले मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराएरको उनले बताए। ‘क्याबिनेटको निर्णय नभए पनि हुने हो। क्याबिनेटको निर्णय गरेर खुलेआम भनेर यहाँहरूको जस्तो लुकेर साढे ३ बजे दर्ता गर्न लगेको लाई बिहान १०:४० मै मकहाँ आएको थियो भनेर कीर्ते सनाखत गरेर चल्ने हाम्रो चलन छैन। मन्त्रिपरिषदमा निर्णय गर्दा नेपालको संविधानबमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने र निर्वाचनमा जाने भन्ने निर्णय गर्यौं। त्यसछि त्यो निर्णय सिफारिस गर्दा प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने हो। वकिलहरूलाई यति त थाहा हुनुहुनुपर्छ नि।’
ओलीले आफूले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुलाई भेटेको भन्ने समाचारमा कुनै सत्यता नभएको दावी पनि गरे। आफूले न्यायाधीशलाई कहिल्यै देख्न पनि नदेखेको र चिन्न पनि नचिनेको जिकिर गरे। उनले भने, ‘न्यायाधीश प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गए भनियो, यो भन्दा झुट के हुन्छ ? न्याय प्रणालीमाथिको जनताको विश्वास हटाउनको लागि, न्याय प्रणालीमाथिको यो गम्भीर प्रहार हो। योभन्दा घिनलाग्दो कुरा के हुन्छ ? उहाँहरु यस कुरालाई प्रमाणित गरेर देखाउन सक्नुहुन्छ ?’
उनले अगाडि भने, ‘ती नाम गरेका न्यायाधीशजीहरुलाई मैले सायद कहिल्यै भेटेको पनि छैन। यसपल्ट मात्रै होइन, कहिल्यै पनि सायद भेटेको छैन। सपना प्रधान मल्ललाई मैले भेटेको थिएँ, सर्वोच्चको न्यायाधीश हुनुभन्दा अगाडि वकिल भएका बेला। त्यो पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा। व्यक्तिगत भेटघाट कहिल्यै भएको छैन। अरु न्यायाधीशहरुलाई मैले देखेको पनि छैन। सायद चिनेको पनि छैन। हिजो सर्वोच्च अदालतले खण्डन गरिसक्यो।’
ओलीले एकपल्ट पनि सूर्य चिह्नमा चुनाव नलडेको व्यक्तिले सूर्य चिह्नको दाबी गरेको भन्दै कटाक्ष गरे। उनले सूर्य चिह्न चाहिने भए बैठकमा आउनुपर्ने बताए। उनले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधव कुमार नेपाललगायत नेताहरु केन्द्रीय कमिटीमा नआएर अध्यक्ष र महासचिवलाई थाहा नदिई निर्वाचन आयोग गएको बताए। ‘चुनाव चिह्न किन चाहियो ? चिह्न दाबी गरेकोले एकपटक पनि चुनाव लडेको छैन। सूर्य चिह्न चाहिन्छ भने बैठकमा आउनुस्।’